Mabhuku akanakisa ekupa iyi Kisimusi 2022 | Zvazvino Zvinyorwa
Lola curiel | | Mabhuku, Literature, dzakawanda
Mamwe mazuva ari kusvika uye navo kunouya kutemwa nemusoro kune avo vedu vanofunga paminiti yekupedzisira zvatichazopa kune vedu vadiwa. Kana usati wavhara kutenga kwako kweKisimusi uye wave kutopererwa nemazano, rega ndikuudze kuti bhuku rinowanzo kuve sarudzo yakanaka kwazvo. Kune akawanda marudzi uye madingindira, sarudza imwe inofarira iye munhu akakosha uye kumushamisa nenyaya yakanaka.
Munyaya iyi Ndiri kuzogovana newe runyorwa rwemabhuku akanakisa ekupa ino Kisimusi. Ndinovimba kuti zvandikurudzira, nemhando dzakasiyana dzemadimikira, zvinobatsira kukurudzira iwe kuti ugone kumira kuputira zvipo uye kutanga kunakidzwa nemazuva mashoma ekuzorora.
2 Gungwa kuti risvike kwauri
3 Kuuraya kwaSocrates
4 Kutsvaga Kwemunhu Kune Chinangwa
5 Sekuru vanodiwa: pakati pako neni. Ndiudze nyaya yehupenyu hwako
7 Mutsara wemoto
8 Yedu isina kukwana nyaya yerudo
9 Vakadzi vemweya wangu
10 Pandinenge ndakura ndinoda kuva ... kufara
Unogona kutenga bhuku pano: Invisible
Iyi novel na Eloy Moreno ndeimwe yenyaya dzinofadza moyo dzisina muganhu wezera. Kana iwe uchitsvaga wekushushikana, akasiyana, echokwadi uye anomutsa kufunga kuverenga, iri ndiro bhuku rauri kutsvaga.
Invisible inotaurira nyaya yemwana, zvakanaka sei inogona kunge iri nyaya yeumwe wedu, uye inotikoka kuti tifunge zvakare zvatakaita kana kutambura sevechidiki uye zviri kuitika muzvikoro nhasi. Ini handidi kugera zano muzvinyorwa zvangu nekuti zvaizobira mashiripiti ekuzviwana zvishoma nezvishoma, panguva imwechete yaunozviisa iwe mushangu dzevanyori. Ehe, ini ndinokuudza kuti ino nyowani, kunyangwe iri yakaoma, ichakurova, ichakubatsira kuporesa maronda ekare uye inoba musodzi (kubva kwauri kana munhu waunomupa).
Gungwa kuti risvike kwauri
Unogona kutenga bhuku pano: Gungwa kuti risvike kwauri
Iri bhuku, finalist yePlaneta Mubairo 2020, ingano izere nerudo, nyoro, hushingi uye hwakazara nezvakavanzika zvemhuri. Kana iwe uchida kumutsa manzwiro uye nemanzwiro, usazvifungisisa, Sandra Barneda haatadze kunyora nyaya dzinobaya moyo.
Uye zvakare, kusavapo ndeimwe yemisoro yepakati yenoveli uye rudo rwunoratidzwa semushonga wekukunda, saka Gungwa kuti risvike kwauri Icho chipo chakakwana cheaya mazuva. PaKisimusi, ndangariro dzevadiwa avo vasisipo dzinomutsiridzwa uye nyaya dzinobata nezvikamu zvakaoma zvehupenyu ndizvo zvinotibatsira kubata nekurasikirwa ikoko.
Unogona kutenga bhuku pano: Kuuraya kwaSocrates
Mumwe wekupedzisira wePlaneta Prize iyo yaisakwanisa kushayikwa kubva pamazita emabhuku akanakisa kupa iyi Kisimusi iri Kuuraya kwaSocrates, yakarohwa naMarcos Chicot. Iyo novel iri zvichibva pazviitiko chaizvo uye mavaraKunyangwe munyori achizvitendera mamwe marezinesi ekugadzira ayo, mumaonero angu, anovandudza zano uye kuita kuti riwedzere kukwezva.
Gara mune yechinyakare Girisi, Basa raChicot rinotakura iwe, rinokunyudza munzira yehupenyu yenguva uye rinokuunza padyo nemufananidzo weumwe wevazivi vepamusoro vevanhu. Kuuraya kwaSocrates zviri pachena chibereko cheyekunyatsoshanda zvinyorwa zvinyorwa uye zvinogona kuva chipo chakakwana cheKisimusi kune wese anoda firosofi uye nhoroondo.
Kutsvaga Kwemunhu Kune Chinangwa
Unogona kutenga bhuku pano: Kutsvaga Kwemunhu Kune Chinangwa
Viktor Frankl aive chiremba wezvepfungwa uye munyori weAustria uyo akaiswa mutirongo mumisasa yevasungwa yakasiyana siyana muNazi Germany, kusanganisira Auschwitz.
Kutsvaga Kwemunhu Kune Chinangwa Ndicho autobiographical basa umo Frankl haangotauri nezve zvakaitika kwaari mune idzodzo, asi zvakare inounganidza kuongororwa kwezvikamu zvepfungwa izvo vasungwa vakapfuura, vachitaura nezvazvo mawaniro aakaita zvinoreva mukurwadziwa, kutambura uye nehupenyu. Iri ibhuku rakanaka rekupa Kisimusi ino, kunyanya kana munhu ari kuigamuchira achisarudza ngano chaidzo kungano.
Sekuru vanodiwa: pakati pako neni. Ndiudze nyaya yehupenyu hwako
Unogona kutenga bhuku pano: Sekuru vanodiwa: pakati pako neni. Ndiudze nyaya yehupenyu hwako
Ini ndagara ndakuyambira pamberi kuti bhuku iri harisi bhuku rekushandisa, kupfuura chero chinhu nekuti mapeji aro anenge asina chinhu. Mukufunga kwangu zvipo zvakanaka zvinodzosa ndangariro kana kuti zvine simba zvakakwana kuti zvibudise Hazvingave zvakanaka here kuita chipo chinokwanisa zvese izvi?
Sekuru vanodiwa: pakati pako neni. Ndiudze nyaya yehupenyu hwako Iri bhuku rakanyorwa hafu uye izvo inopa vakuru vedu mukana wekutaura nyaya yavo. Isu hatiwanzo kugara navo kuti titeerere kune zvavaive vachiri vadiki, hatizive zviroto zvavo uye pamwe hatina kana kumbomira kufunga kuti vaive navo kana kuti vanogona vachiri kuzvichengeta. Kana iwe uchida kupa sekuru vako chipo, usazeze, iri bhuku chichava chipo chenyu mose. Vanasekuru nasekuru havasi vekusingaperi, asi mazwi avo anogona kufamba nesu nekusingaperi.
Unogona kutenga bhuku pano: Aquitaine
Iyeye akakosha munhu ane hutera hwechakavanzika? Ini ndinopa kwauri mukwikwidzi akakodzera kuti atore nzvimbo iyo ichiri yemahara pasi pemuti wako: Aquitaine, inoverengeka naEva García Sáenz de Urturi.
Este zvinonakidza, yakanyatso kutakurwa nehukasha uye kutsiva, inotarisa kuurayiwa kweMuchinda weAkitaine, mugore ra1137. Eleanor achatsvaga kugadzirisa zvikwereti nezvaaifunga kuti mhondi yababa vake nekuroora mwanakomana wake, asingazive kuti zvirongwa zvake zvaizoenda nenzira isiri iyo. Vetietta iyi inozopedzisira yave kutsvaga mhinduro uye Eleanor anozoferefeta nemurume wake mutsva chii chakatungamira baba vake kuguva.
Unogona kutenga bhuku pano: Mutsara wemoto
Yekupedzisira yehondo nhoroondo naArturo Pérez Reverte Panguva ino anotidzosera kuSpanish Civil War kuti atiudze nezvehondo yeEbro, imwe yeropa rakanyanya ropa munhoroondo yeSpain. Mavara, masoja madiki akarwa muhondo iyi, ndeyekunyepedzera, asi chokwadi uye nyaya dzavakafemerwa ndezvechokwadi.
Nebasa rakanaka kwazvo rezvinyorwa, Reverte inotinyudza mune iyo nyaya uye hutsinye hwehondo, nekuda kwepeni yake yakanaka uye neicho chaicho chemutori wenhau uyo ​​akafukidza kanopfuura kamwe kupokana. Nhoroondo uye fungidziro zvinowirirana kuti vagadzire iri basa rakakura chingave chipo chakabudirira kwazvo cheKisimusi ino. Kana iwe uchida kuziva mamwe mabhuku nemunyori, usapotsa iyi posvo pane yedu blog.
Yedu isina kukwana nyaya yerudo
Unogona kutenga bhuku pano: Yedu isina kukwana nyaya yerudo
Madimikira enoveli anowanzo zadzwa neanofungidzirwa, ini handisi kuti izvi hazvina kunaka, nekuverenga isu tinotsvaga kupukunyuka uye fungidziro yemaruva, machokoreti uye kuda kunogona kutizadza netariro. Zvisinei, zvakanaka kudzidza kukoshesa rudo sezvazviri: kusakwana.
Mubhuku rino, Anna García anotikunda nenyaya yechokwadi yerudo, isina kukwana, nyoro uye inopukunyuka kubva kune yakasarudzika clichés yenguva dzose. Mumhuri, hazvisi zvese zvine mutsindo uye muchato hausi wekungodya mapaseji chete, pane matambudziko uye ndosaka tichidanana zvishoma.
Yedu isina kukwana nyaya yerudo ndiko kuratidzwa kweicho chokwadi uye, kunyangwe paine hukasha, uchakwanisa kubata moyo wemunhu waunopa chipo ichi. Zvakare, kune chikamu chechipiri, Yedu yakakwana rudo nyaya, kana iwe uchida kumuremedza zvishoma.
Vakadzi vemweya wangu
Unogona kutenga bhuku pano: Vakadzi vemweya wangu
Vakadzi vemweya wangu ndiyo yekupedzisira novel ya Isabel Allende. Munyori weChilean anotiunza padhuze nezvakaitika kwaari uye nemaonero ake nezvechikadzi nebhuku iri rehupenyu hwevanhu iro rinosanganisira kuratidzwa kwega kwega.
Mumapeji aro, anotora rwendo kuburikidza nehupenyu hwake hwese uye anotiudza nezve chisungo chaakachengetedza pamwe nesangano revakadzi kubva paudiki hwake kusvika nhasi. Rangarira vakadzi vakaratidza hupenyu hwako, kune vanyori nenhamba vaive vakakosha munyika yeunyanzvi uye vane nyaya dzakakodzera kutariswa. Basa rinonakidza uye ne simba rekumutsa hurukuro dzinonakidza. Mune maonero angu, rimwe remabhuku akanakisa ekupa ino Kisimusi.
Pandinenge ndakura ndinoda kuva ... kufara
Unogona kutenga bhuku pano: Pandinenge ndakura ndinoda kuva ... kufara
Uyu kuunganidzwa kwenyaya naAnna Morato García Ndicho Sarudzo huru kana iwe uchida kuti vana vari mumba vawane hungwaru pakuverenga. Nyaya yemunyori yaive kure nemabhuku, aive akazvipira kushambadziro uye nenyaya dzebhizinesi, kusvikira ave mai. Chido chekuisa mukati mevana vake huwandu hwehunhu uye hunhu hwakanaka kune hupenyu hwakamutungamira kuti anyore nyaya dzake.
Yakanyorwa nerudo rukuru, nyaya dzakaunganidzwa mukati Pandinenge ndakura ndinoda kuva ... kufara, fambisa tsika zvakakosha sekunzwira tsitsi, kuzvivimba kana kutenda, kushandira mukuwedzera kune varaidzo uye kubatsira kusimbisa kuzviremekedza kwevana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Mabhuku akanakisa ekupa Kisimusi ino